Strategy First - Upcoming Classes - ICM
ICM Single Subject Diploma January and February Intake (Batch -16 Plus)
၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ တို့တွင် UK ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်။
Click here to call us now:+959250717166-67-68
Institute of Commercial Management (ICM), UK မှ စစ်ဆေးသော (၃) နာရီ ရေးဖြေမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် Single Subject Diploma များ ရရှိပါမည်။ အတန်းများအားလုံး ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပြီးပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုလိုပါက ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလတွင် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
Strategy First မှ သတ်မှတ်သော ကျောင်းခေါ်ချိန်နှင့် အတန်းတွင်း စာမေးပွဲ ဖြေဆုိုအောင်မြင်ပါက Strategy First မှ Certificate of Completion ကို ထုတ်ပေးပါသည်။
သင်တန်းကြေးအပြင် - ICM တစ်နှစ်စာ Registration Fees ၅၀ ဒေါ်လာ နှင့် စာမေးပွဲကြေးတစ်ဘာသာ အတွက်ဒေါ်လာ ၆၀ ထပ်မံပေးသွင်းရပါသည်။ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်ဘာသာထပ် ပိုပြီးဖြေဆုိုပါက Register Fees ထပ်မံပေးသွင်းရန်မလုိုပါ။
Human Resources Management နှင့် Marketing Management ဘာသာရပ်များတွင် original textbook များ စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည့်အတွက်ဖတ်စာအုပ်တန်ဖိုး၂၅,၀၀၀ ကျပ် ထပ်မံပေးသွင်းရပါမည်။ Business Management & Administration ဘာသာရပ်အတွက် original textbook တန်ဖိုး ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ထပ်မံပေးသွင်းရပါမည်။
** ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Batch (16 Plus) အတန်းခွဲများကို လာရောက်အပ်နှံပါက Refer (Discount 20,000 Kyat) နှင့် Cash Down ပေးချေပါက 5% Discount အပြင် Online Registration ဖြင့် Register လုပ်ဆောင်ပါက (Discount 20,000 Kyat) ထပ်မံခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ **
ICM Single Subject Diploma in January And February Intake (Batch 16 Plus)
Business Management & Administration (Session-14)
Business Management & Administration (Session-15)
Business Management & Administration (Session-16)
Daw Cho Me Maung Maung
Human Resources Management (Session-6)
Daw Nang Shwe Yee Thein
Human Resources Management (Session-7)
Dr. U Aung Ko Ko
U Wisara Campus
ICM Single Subject Diploma in January And February for 2019 Intake(Batch2Plus) Hleden Campus
Business Management & Administration(Session-7)
Daw Thidar Aye
Business Management & Administration(Session-8)
Business Management & Administration(Session-9)
Human Resources Management(Session-4)
Project Management (Session-3)
နှစ်ဘာသာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်အတွင်းမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1.International Business Communications | 2. Advertising |
3.Customer Services | 4. Marketing Research and Quantitative Methods |
5.Leadership | 6. Business Law |7.Operations Management |8.Consumer Behaviour | 9. Risk Management | 10. Banking Management